प्रिमियर इन्स्योरेन्सको खुद बीमाशुल्क आर्जन २१.९२%ले बढ्यो, नाफा रु. १५.५६ करोड
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। यो हिसाबले समीक्षा अवधिमा कम्पनीको...
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज माघ ४ गते अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भोलि माघ ५ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आज माघ ४ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्रै यो कम्पनीको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछ। प्रिमियर...
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले आफ्नो २८ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो माघ २१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित प्रिमियर भवनमा बिहान ११ बजेदेखि भिडियो कन्फ्रेन्स माध्यमबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ५ लाख बढी कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले संस्थापक समूहको सेयर आज पुस २६ गतेबाट लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले संस्थापक समूहको ५ लाख ३८ हजार ९६५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनी वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा राखिएको...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले चुक्तापुँजीको कुल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। जसमा ७.५ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड ५ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र ७.५ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड ५ लाख ९२ हजार...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ५.४२ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको झन्डै ५ लाख ४२ हजार कित्ता बढी संस्थापक सेयर आज साउन १४ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीले ५ लाख ४२ हजार ९६५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्�...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । लिलामीमा राखिएको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको झन्डै साढे ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज शुक्रबार अन्तिम दिन रहेको छ। आज असार २७ गतेबाट कम्पनीले ५ लाख ४८ हजार २५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीका लागि राखेको छ। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको झन्डै साढे ५ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको झन्डै साढे ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज असार २७ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीले ५ लाख ४८ हजार २५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीका लागि राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्ने�...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सेयर लिलामीमा उठाउने आज अन्तिम मौका
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले लिलामीमा राखेको झन्डै साढे ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज असार २५ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत असार १६ गतेबाट ५ लाख ४८ हजार २५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीका लागि राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकका साथै जोकोही व्यक्ति,...
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको झन्डै साढे ५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर आज असार १६ गतेबाट लिलामीमा राखिएको छ। कम्पनीले ५ लाख ४८ हजार २५ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बिक्रीका लागि राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाले बोलपत्र पेस गर्न सक्ने�...
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५९ करोड रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ११.४१ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले राख्यो सीआईटीको १ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) मा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज बुधबारदेखि लिलामीमा राखेको छ। प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सीआईटीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल १ लाख ३ हजार ७०० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १...
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत फागुन २६ गते बसेको बैठकले आउँदो चैत २३ गते वार्षिक साधारणसभा डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको हाल...